ဂင်းနစ်စာရင်းဝင်သွားတဲ့ ဂျပန်သရုပ်ဆောင်ရဲ့ PPAP | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
ဂင်းနစ်စာရင်းဝင်သွားတဲ့ ဂျပန်သရုပ်ဆောင်ရဲ့ PPAP
ဂျပန်ဟာသ သရုပ်ဆောင် ပီကိုတာရိုရဲ့ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် လူကြိုက်များသွားတဲ့ PPAP သီချင်းကို ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်အဖြစ် တိုကျိုမှာကျင်းပတဲ့ ထိပ်ဆုံးစာရင်းဝင်သီချင်းများချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားမှာ အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ဘီလ်ဘုတ်ရဲ့ ထိပ်ဆုံး (၁၀၀)သီချင်းစာရင်းထဲမှာ ချိတ်နေတဲ့ PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) သီချင်းဟာ (၄၅)စက္ကန့်သာရှိတဲ့ အတိုဆုံးသီချင်းဖြစ်ပြီးတော့ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့အထိ အမေရိကန်ရဲ့ ထိပ်ဆုံးစာရင်းမှာ ပါနေတာ တကယ်ကို မယုံနိုင်ဖြစ်ကြရတာပါ။
ဒီသီချင်းဗွီဒီယိုကို သြဂုတ်လအတွင်းက ယူကျုမှာ တင်လိုက်ချိန်မှာ ပေါ့ပ်စတားဖြစ်တဲ့ ဂျက်စတင်ဘီဘာက အင်တာနက်က သူ့အကြိုက်ဆုံး ဗွီဒီယိုပါဆိုပြီး တွစ်တာမှာ တင်လိုက်တာကလည်း လူသိများစေဖို့ နည်းနည်းတော့ အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ ဆိုကြပြီး လက်ရှိမှာတော့ ဒီသီချင်းကို ကြည့်ရှုသူ (၆၇)သန်းကျော်ရှိနေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီသီချင်းရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၅၀)သာ ရှိတယ်လို့ သိရပြီး ကျားသစ်ကွက်ဝတ်စုံနဲ့ ပီကိုတာရိုက"I haveapen. I have an apple. Apple pen." ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းစာသားကို ရွတ်ဆိုသွားတာပါ။
“ ဒီလိုရုတ်တရက် လူသိများသွားတာကို ကျွန်တော် အံ့အားသင့်မိတယ်။ ဂျက်စတင်ကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် ဒီခန်းမထဲက လူလေးယောက်လောက်ပဲ ဒါကို ကြည့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်”လို့ ၅၃ နှစ်အရွယ်ရှိနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
ဘီလ်ဘုတ်ရဲ့ထိပ်ဆုံးသီချင်း (၁၀၀)စာရင်းမှာ ဂျပန်အဆိုတော်ရဲ့ သီချင်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီး (၂၆)နှစ်အကြာမှာ ဒီသီချင်းက ဒီတစ်ပတ် US ရဲ့ ထိပ်ဆုံးစာရင်းမှာ နံပါတ် (၇၇)နေရာကို ရယူလိုက်တာပါ။
လက်ရှိမှာတော့ သရုပ်ဆောင်က ကမ္ဘာလှည့်သီဆိုမယ်လို့ မျှော်မှန်းထားပြီး နောက်ထပ် ဒီလိုပျော်စရာ သီချင်းတွေကိုလည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထုတ်လုပ်ဦးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂပြနျဟာသ သရုပျဆောငျ ပီကိုတာရိုရဲ့ အံ့သွဖှယျကောငျးလောကျအောငျ လူကွိုကျမြားသှားတဲ့ PPAP သီခငျြးကို ဂငျးနဈမှတျတမျးဝငျအဖွဈ တိုကြိုမှာကငျြးပတဲ့ ထိပျဆုံးစာရငျးဝငျသီခငျြးမြားခြီးမွှငျ့ခွငျး အခမျးအနားမှာ အသိအမှတျပွုလိုကျပါတယျ။
ဘီလျဘုတျရဲ့ ထိပျဆုံး (၁၀၀)သီခငျြးစာရငျးထဲမှာ ခြိတျနတေဲ့ PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) သီခငျြးဟာ (၄၅)စက်ကနျ့သာရှိတဲ့ အတိုဆုံးသီခငျြးဖွဈပွီးတော့ အောကျတိုဘာလ ၂၉ ရကျနအေ့ထိ အမရေိကနျရဲ့ ထိပျဆုံးစာရငျးမှာ ပါနတော တကယျကို မယုံနိုငျဖွဈကွရတာပါ။
ဒီသီခငျြးဗှီဒီယိုကို သွဂုတျလအတှငျးက ယူကြုမှာ တငျလိုကျခြိနျမှာ ပေါ့ပျစတားဖွဈတဲ့ ဂကျြစတငျဘီဘာက အငျတာနကျက သူ့အကွိုကျဆုံး ဗှီဒီယိုပါဆိုပွီး တှဈတာမှာ တငျလိုကျတာကလညျး လူသိမြားစဖေို့ နညျးနညျးတော့ အထောကျအကူဖွဈမယျလို့ ဆိုကွပွီး လကျရှိမှာတော့ ဒီသီခငျြးကို ကွညျ့ရှုသူ (၆၇)သနျးကြျောရှိနပွေီလို့ ဆိုပါတယျ။
ဒီသီခငျြးရဲ့ ထုတျလုပျမှုကုနျကစြရိတျက အမရေိကနျဒျေါလာ (၉၅၀)သာ ရှိတယျလို့ သိရပွီး ကြားသဈကှကျဝတျစုံနဲ့ ပီကိုတာရိုက"I haveapen. I have an apple. Apple pen." ဆိုတဲ့ အင်ျဂလိပျသီခငျြးစာသားကို ရှတျဆိုသှားတာပါ။
“ ဒီလိုရုတျတရကျ လူသိမြားသှားတာကို ကြှနျတျော အံ့အားသငျ့မိတယျ။ ဂကျြစတငျကွောငျ့သာ မဟုတျရငျ ဒီခနျးမထဲက လူလေးယောကျလောကျပဲ ဒါကို ကွညျ့ဖွဈမယျထငျပါတယျ”လို့ ၅၃ နှဈအရှယျရှိနတေဲ့ သရုပျဆောငျက သတငျးထောကျတှကေို ပွောပါတယျ။
ဘီလျဘုတျရဲ့ထိပျဆုံးသီခငျြး (၁၀၀)စာရငျးမှာ ဂပြနျအဆိုတျောရဲ့ သီခငျြး မှတျတမျးဝငျခဲ့ပွီး (၂၆)နှဈအကွာမှာ ဒီသီခငျြးက ဒီတဈပတျ US ရဲ့ ထိပျဆုံးစာရငျးမှာ နံပါတျ (၇၇)နရောကို ရယူလိုကျတာပါ။
လကျရှိမှာတော့ သရုပျဆောငျက ကမ်ဘာလှညျ့သီဆိုမယျလို့ မြှျောမှနျးထားပွီး နောကျထပျ ဒီလိုပြျောစရာ သီခငျြးတှကေိုလညျး မွနျမွနျဆနျဆနျ ထုတျလုပျဦးမယျလို့ ဆိုပါတယျ။